မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်
Apann Pyay 12:50 PM ဗဟုသုတအစုံ , ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
အချစ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ဟာ သိပ်ကိုထူးဆန်း လွန်းပါတယ် ။ ဘာကိုချစ်တာလဲ ။ ဘာကြောင့် ချစ်တာလဲလို့ တစုံတစ်ယောက်ကများ မေးလာခဲ့မယ်ဆို တိတိကျကျ ဖြေနိုင်မယ်မထင်ပါ ။ ကျွန်မကို အဲဒီလိုမေးခွန်းမျိုး မေးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သူ့အလိုလို ရင်ထဲကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ခံစားချက်သက်သက်လို့ ဖြေမိမှာပဲ ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မ ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ အချစ်ဆိုတာ သူဘယ်လိုနေနေ ချစ်တယ် ။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိကို ချစ်မိတာမျိုး ။ ဘာကြောင့် ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချကလည်း ကျွန်မမှာ မရှိဘူး ။ ရှိလည်း မရှိသင့်ဘူးလားလို့ ။ အကြောင်းပြချက် တစ်ခုခုကြောင့်သာ ချစ်မိသွားတယ်ဆို ဒါဟာအချစ်မဟုတ်ဘူး ။ စွဲလန်းမှု တစ်ခုပဲ ဖြစ်နိုင်တယ် ။ ကျွန်မ သူ့ကို စွဲလန်းခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး ။ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မရှိဘဲကို ချစ်ခဲ့မိတာ ။
ကိုကြီးဆိုတဲ့ သူ့ကို မြင်မြင်ချင်းချင်း ချစ်ခဲ့မိတယ် ။ ကိုကြီးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အလေ့အကျင့် အားလုံးလိုလိုကိုလည်း မြတ်နိုးခဲ့တယ် ။ နောက်ဆုံး ကိုကြီးဖြတ်သွားလို့ ကျန်နေရစ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်သင်းရနံ့လေးကအစ ရင်ခုန်မိတယ် ။ ကိုကြီးနဲ့ ပတ်သတ်မှု့တိုင်းကို ရူးရူးမူးမူး ချစ်မိသွားတဲ့ အထိကို ကျွန်မဆိုတဲ့ *ရိုးရိုးရှင်းရှင်း*က ၊ ကိုကြီးဆိုတဲ့ *၀န်းရံခ* ကို အရမ်းချစ်ခဲ့ပါတယ် ။
ကိုကြီးက အမြဲတမ်း တက်ကြွလန်းဆန်းနေပြီး အစနောက်ကလည်း သန်လွန်သူပါ ။ အမြဲလိုလို ပျော်ပျော်နေတတ်ပါတယ် ။ အဲဒီလို လူတစ်ယောက်ကို တိတ်တခိုး သဘောကျနေတဲ့ ကျွန်မကတော့ အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်သူပါ ။ ပန်းရောင်အကျီ်တွေကိုပဲ ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး ပြောင်းပြီး ၀တ်ဆင်တတ်တယ် ။ အဲဒီလို တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာ နေတတ်တဲ့ ရှင်း လိုမိန်းကလေး တစ်ယောက်က ၊ အစနောက်သန်ပြီး အငြိမ်မနေတတ်သူ ကိုကြီးကို တိတ်တခိုး ချစ်နေခဲ့တာ အနည်းငယ်တော့ ထူးဆန်းနေပါတယ် ။
ကိုကြီးနဲ့ရှင်းက ဥပဒေမေဂျာနဲ့ DAY-တက် နေကြသူတွေပါ ။ ကိုကြီးက FINAL ။ ရှင်းက third-year ။ ကိုကြီးကို ချစ်မိနေပေမဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရှင်း ရင်ထဲက ရှိတာတွေ ကိုကြီးသိအောင် လုပ်ဖို့မပြောနဲ့ ရေလာမြောင်းပေးတောင် လုပ်ဖို့ တော်တော် မလွယ်တဲ့ အလုပ်ပါ ။ ဒါပေမဲ့ ကိုကြီးဆီက အချစ်ကိုတော့ ရိုးရှင်းစွာနဲ့ မျှော်လင့် ၊ တောင့်တမိတယ်။
ကိုကြီးနဲ့ရှင်းကြားမှာ မှတ်မှတ်ထင်ထင် ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခုကို ကံတရားက ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီဖန်တီမှုလေးက ကိုကြီးအတွက် ကံဆိုးစေမှုတစ်ခုပေမဲ့ ရှင်းအတွက်တော့ ကံကောင်းမှု လေးတစ်ခု ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် ။ ဘာလဲဆိုတော့ ကိုကြီးက FINALမှာ စာမေးပွဲ ကျပါတယ် ။ ရှင်းက အောင်တော့ ကိုကြီးနဲ့ အတန်းတူတူ ဖြစ်သွားခဲ့တယ် ။ ကိုကြီးက စာမေးပွဲ ကျပေမဲ့ ခပ်ပျော်ပျော်ပါပဲ။
ကိုကြီးနဲ့ရှင်း စတင်ပတ်သတ်ဖို့ ကံတရားက ရှင်းကို မျက်နှာစာပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ ။
အဲဒီနေ့က အခန်းထဲက ခပ်တည်တည်နဲ့ ထွက်လာတဲ့ ရှင်းကို ကိုကြီးက အားပါးတရ ပြုံးပြနေတော့ ရှင်း အံ့သြသွားခဲ့တယ် ။ သူအနားရောက်တော့
“ ဟိတ် ရိုးရိုးရှင်း paper(1) စာအုပ် ခဏငှားပါလား........ မမှီလိုက်လို့ပါ ”
“ ဘယ်မှီမှာလဲ သူများတွေကို လိုက်စနောက်နေတာကို ”
ပါးစပ်ကပြောလဲပြော လက်ကလည်း လွယ်အိတ်ထဲက စာအုပ်ကို ယူကာ ပေးပြီးဖြစ်နေတယ် ။
“ မနက်ဖြန် ရှင်းစာအုပ်ကို မမေ့နဲ့နော် ကိုဝန်းရံခ ”
“ မမေ့ပါဘူး........စိတ်ချ ။ လိုက်စတယ် ဆိုတာကလည်း ခင်လို့စတာပါ ။ ဒါနဲ့ ကိုယ်ကို ကိုဝန်းရံခလို့ မခေါ်ပါနဲ့ ။ ရိုးရိုးရှင်းထက် ကြီးတယ်လေ ကိုကြီးလို့ ခေါ်လေ.........နာမည်အပြည့်စုံ ခေါ်တော့ မောတာပေါ့ ”
“ဟုတ်ကဲ့ ။ ရှင်း သွားတော့မယ် ”
ဒီနေ့ ရှင်းဆီက စာအုပ်ငှားတာရော ၊ ကိုကြီးနှင့် တရင်းတနှီး စကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ပါ ရှင်း အရမ်းပျော်သွားတယ် ။ ။ ရှင်း ရင်ထဲကနေ တိတ်တခိုးခေါ်နေမိတဲ့ နာမည်လေးက ကိုကြီိးခေါ်ခိုင်းတဲ့ နာမည်လေးနဲ့ ထပ်တူကျနေတဲ့အတွက်ပါ ကြည်နူးနေမိတယ် ။ ဒါနိမိတ်ကောင်းတစ်ခုလို့ အသားယူ မှတ်ထားပါရစေ ကိုကြီးရယ် ။
တစ်နေ့ ရှင်း အရမ်းအံ့သြ သွားခဲ့တယ် ။ အသက်ရှူရပ်သွားပြီးလို့ ထင်လိုက်ရတယ် ။ ရင်တွေ အခုန်နေခဲ့ပါတယ် ။ ကြည်နူးလိုက်တာ ။ ရှင်း စာအုပ်တစ်အုပ်ကို စိတ်ဝင်တစား ဖတ်နေချိန်မှာ ကိုကြီးတို့သူငယ်ချင်းတစ်စု ရှင်းဘေးက နေဖြတ်သွားကြတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ရှင်းစာအုပ်ပေါ်ကို အရမ်းလှတဲ့ နှင်းဆီပန်းအဖြူလေးတစ်ပွင့် ကျလာတယ် ။ ကျလာတဲ့ ပန်းလေးကို တအံ့တသြ ကိုင်လိုက်ပြီးတာနဲ့ မော့ကြည့်လိုက်တော့ ပန်းပွင့်ကလေးရဲ့ ပိုင်ရှင်က ကိုကြီး ဖြစ်နေတယ် ။ ပန်းပွင့်ကလေး တင်ပေးသွားပြီး ခပ်တည်တည် ဆက်လျှောက်သွားပါတယ် ။ ရှင်းက အံ့သြပြီး စိုက်ကြည့်နေချိန် ကိုကြီး ပြန်လှည့်ကြည့်တာနဲ့ အကြည့်ချင်း ဆုံသွားကြတယ် ။ ရှင်းရင်ထဲ အတိုင်းဆမသိ ပျော်ရွင် ကြည်နူးသွားမိပေမဲ့ ရှင်းမျက်နှာပေါ်မှာတော့ အဲဒီအမူယာတွေ တစ်ခုမှ မပေါ်အောင် နေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
အဲဒီနောက်ပိုင်းကစပြီး ကိုကြီးနဲ့ရှင်းကို လူတော်တော်များများ သတိထားမိသွားကြတယ် ။ ကိုကြီးရဲ့ အစနောက်သန်မှု နဲ့ ရှင်းရဲ့အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုကလည်း ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်နေပြန်တော့ လူအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားခြင်းကို ပိုခံရတယ် ။ ရှင်းအနေနဲ့ ကိုကြီးကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ရှောင်ဖယ်နေနေ ကိုကြီးကတော့ လုံးဝနောက်မဆုတ်ပါဘူး။ ကိုကြီး အပြုမှူတွေက ရှင်း အတွက်
ရင်ခုန်လှိုက်မောဖွယ် ကောင်းပေမဲ့ ကိုကြီးကို ရှင်း အပြည့်အ၀ မယုံကြည်ရဲသေးဘူး ။ ညဘက်တွေ ရှင်းဆီကို ဖုန်းဆက်တာက တမျိုး ။
တနေ့ ကိုကြီးဆီက ဖုန်းလာပါတယ် ။
“ ရှင်း ကိုကြီးပါ ”
“ကိုကြီး ရှင်းကို ဘာကိစ္စနဲ့အတင်းလိုက်ပတ်သတ်နေတာလဲ”
“ဘာဖြစ်လို့လဲ ရှင်းရဲ့ ။ ကိုကြီးနဲ့ ရှင်းက မေဂျာတူ သူငယ်ချင်းတွေလေ ။ မဟုတ်ဘူးလား”
“မေဂျာတူ ဆိုတာတော့ ဟုတ်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေမှ မဟုတ်တာ”
“ကိုကြီးကတော့ သူငယ်ချင်းပဲ ”
“ ရှင်းက ဘယ်သူကို မှ လွယ်လွယ်မခင်တတ်ဘူး ”
ရှင်း ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော ကိုကြီးက လုံးဝ ဂရုမစိုက်ပါဘူး ။ သူဖြစ်ချင်တာ သူပြောချင်တာကိုပဲ ဇွတ်တိုးပူဆာ တတ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကိုကြီးရဲ့စကားသံတွေက ကြာင်နာမှု နွေးထွေးမှု တွေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ စီးမျောပါဝင်နေတာကိုတော့ ရှင်း မငြင်းနိုင်ပါဘူး ။ ကိုကြီးလို လူတစ်ယောက်က အခုလို ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ရင်ခုန်မှုမျိုးတွေကို ပေးစွမ်းစေမယ်လို့ လုံးဝ မထင်ခဲ့မိဘူး။
ဒီလိုနဲ့ စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးချိန်မှ ကျောင်းတွေ ပိတ်သွားခဲ့ပါပြီ ။ ရှင်း ကိုကြီးကို လုံးဝ မတွေ့ရတော့ပါဘူး ။ ကိုကြီးရဲ့ စတတ်နောက်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကြောင့် ကိုကြီးအပေါ် မယုံရဲခဲ့တာမို့ ကိုကြီးလိုချင်တဲ့ အဖြေကိုလည်း မပေးခဲ့မိဘူး ။ အခုလို ခွဲရတော့မှ ပိုပြီးလွမ်းတတ်လာခဲ့တယ် ။ ကိုကြီးကို အရမ်းသတိရတယ် ။ အရမ်း လွမ်းနေတယ် ။ ကိုကြီးကို အရမ်းချစ်တယ်ဆိုတာလည်း အခုမှ ပိုပြီး သေချာသွားပါတော့တယ် ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ထားသင့် ထားအပ်တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေကို လုံးဝအပွန်းပဲ့ မခံနိုင်တဲ့အတွက် ရှင်းဘက်က စပြီးဆက်သွယ်ဖို့ကိုတော့ လုံးဝမကြိုးစားပါဘူး ။ကျောင်းတွေပိတ်သွားကတည်းက ဖုန်းလေးတစ်ချက်တောင် ဆက်ဖော်မရတဲ့ ကိုကြီးကို ရှင်းစိတ်ထဲမှာ နာကျည်းနေမိတယ် ။
ရှင်း တစ်ယောက်တည်း အခန်းထဲမှာ ကိုကြီးကို ကြိတ်လွမ်းနေတုန်း အခန်းထဲကို မေမေ ၀င်လာတယ် ။
“သမီးရေ အောက်မှာ ဧည့်သည်တွေ ရောက်နေတယ် ။ သမီးဖေဖေက သမီးလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့တဲ့ ။ မေမေနဲ့ ခဏဆင်းတွေ့ရအောင် ။ အောက်မှာ ဖေဖေလဲ စောင့်နေတယ်”
“ ဘယ်သူတွေလဲ မေမေ ”
“ သမီးဖေဖေရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း မိသားစုလေ ။ ပြန်ဆုံကြတာ မကြာသေးဘူး သမီးရဲ့ ။ ဖေဖေနဲ့မေမေ သမီးလေးကို ကြိုတောင် မပြောထားမိဘူးက ။ သမီးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကိစ္စလေးလည်း ရှိနေတယ် ။ ဘာလဲဆိုတော့ သမီးဖေဖေရဲ့ သားနဲ့သမီးလေးကို နေရာချပေးဖို့ ။ ကြိုမပြောဘူးဆိုတာလည်း မေမေ့သမီးလေးက မေမေတို့စကားကို အမြဲနားထောင်နေကြဆိုတော့ ။ မေမေတို့ စီစဉ်ပေးမယ့် သူက သမီးအတွက် စိတ်ဆင်းရဲရမယ့် လူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ မေမေ ရဲရဲကြီး အာမခံပါတယ် ”
မေမေက စကားအရှည်ကြီး ပြောလိုက်ရလို့ မောသွားဟန်ဖြင့် သက်ပြင်းလေးချရင်း ခဏနားပါတယ် ။ ရှင်းဆီက ပြန်ပြောလာမယ့် အဖြေစကားကို စောင့်ဆိုင်းနားထောင်နေပါတယ် ။
သမီးအလိမ်မာလေးပီပီ ရှင်းဘယ်လိုအင်အားတွေနဲ့ ငြင်းရက်မှာလဲ ။
“ ဟုတ်ကဲ့ပါ မေမေ ။ သမီး ဆင်းတွေ့ပါ့မယ် ”
“ အို ! လိမ်မာလိုက်တဲ့ သမီးလေးရယ် ”
မေမေတို့ စိတ်ချမ်းသာမယ်ဆို သမီးကျေနပ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မေမေရယ် ရှင်း ရင်ထဲမှာတော့ ရင်ကွဲနေရပါပြီ ။ ဒါပေမဲ့ ရှင်းနှလုံးက ကျမဲ့မျက်ရည်တွေကို မေမေတို့ရဲ့ ပီတိအပြုံးတွေနဲ့ ရှင်းလဲလိုက်ပါ့မယ် ။ ကိုကြီးရေ တကယ်ကိုဝေးကြရတော့မယ် ။ ရှင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို
ကြည့်ကောင်းအောင် အနည်းပါးပြင်ဆင်ပြီး မေမေနဲ့အတူ အောက်ထပ်ကို ဆင်းခဲ့လိုက်ပါတော့တယ် ။
ဧည့်သည်မိသားစုက ရှင်းဆင်းလာမယ့်ဘက်ကို ကျောခိုင်းပြီး ထိုင်နေကြပါတယ် ။ ရှင်း ဧည့်ခန်းမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်ရင်း အားလုံးကို ချုံဂုံပြီးပြုံးပြလိုက်ချိန်မှာတော့ ရှင်း အရမ်းအံ့သြသွားခဲ့တယ် ။
“ဟုတ်တယ် သမီးရေ ။ သမီးကိုကြီးက ကြိုမပြောပါနဲ့ဆိုလို့ မေမေတို့လည်း မပြောရတာ ။ သူက အစနောက်သန်တော့ သမီးက သားကို ကြည့်မရဘူးဆို ။ မောင်ဝန်းရံခက မေမေတို့သဘောတူတဲ့ သတို့သားလောင်းပဲ သမီး ။ ကဲသားနဲ့သမီး သေချာ ဆွေးနွေးကြအုံးပေါ့ ”
လူကြီးတွေက ဆွေးနွေးခွင့် ပေးလိုက်တာနဲ့ ရှင်းတို့နှစ်ယောက် ခြံထဲကို ဆင်းလာခဲ့ပါတယ် ။ တနေရာ အရောက်မှာတော့ ရှေ့ကသွားနေတဲ့ ရှင်းကို ကိုကြီးက “ ရှင်း ” လို့ ခပ်တိုးတိုးလေး ကပ်ခေါ်လိုက်ရင်ဘဲ ရှင်း ရင်ခုန်သံတွေ ဆူညံနေပါပြီ ။
“ရှင်း ကိုကြီးကို စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်”
“မဆိုးရဲပါဘူး လူကြီးတွေက ကိုကြီးဘက်က ရှိနေပြီပဲ”
“ဟာကွာ ! ကိုကြီး ရှင်းလေးကို အရမ်းချစ်လို့ပါ ။ အဆုံးရှုံးမခံနိုင်လို့ လူကြီးတွေကို အပူကပ်မိတာပါ”
“ရှင်း ကိုကြီးကို ချစ်လားဟင်...ကိုကြီးကို ပြန်ချစ်ပါနော်”
“ခုမပြောတတ်လဲ ကိုကြီးကို လက်ထပ်ပြီးမှ ပြောနော်”
“အံမယ် ကိုကြီးကို ဘယ်သူက လက်ထပ်မယ်ပြောလို့လဲ”
“ရှင်းကသာပြောနေ လူကြီးတွေက ဖိတ်စာတောင် ရိုက်တော့မယ်ဗျ”
“ဟွန်း! မုန်းစရာ ကောင်းလိုက်တာ”
“ဘာ........ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ ဟုတ်လား”
ရှင်း ဘာပြောပြော သူကို ပန်းနဲ့ပေါက်တယ်လို့ ကိုကြီးကထင်နေလေရဲ့ ။ ပြုံးပျော်နေတာပဲ ။ ရှင်းလည်း အရမ်းပျော်နေပါတယ် ။ ကိုကြီးထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုပျော်နေရသူပါ ။ ကိုကြီးကို အရင်ဆုံး တိတ်တခိုးစွဲလန်း ၊ ချစ်ခဲ့ရသူတစ်ယောက်က ရှင်းပါ ကိုကြီးရယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလျှို့ဝှက်ချက်လေးကို မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ မာနနဲ့ သိက္ခာတရားအတွက် လျှို့ဝှက်ထားပါရစေ ။ ကိုကြီးနဲ့ရှင်းတို့နှစ်ယောက် လျှောက်လှမ်းရမယ့် ဘ၀ခရီးလမ်းလေးဟာ ပျော်ရွင်ကြည်နူးစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေမှာပါ ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုကြီးနဲ့ရှင်းတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေ ထပ်တူညီ နေလို့ပေါ့ ။
အတွဲ ( ၅ ) ၊ အမှတ် ( ၁၂ )
ဒီဇင်ဘာလ ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်
ပထမဦးဆုံး ပရင့်ပါခဲ့သော ၀ထ္ထုတိုလေးပါ
အခဈြဆိုတဲ့ ခံစားခကျြဟာ သိပျကိုထူးဆနျး လှနျးပါတယျ ။ ဘာကိုခဈြတာလဲ ။ ဘာကွောငျ့ ခဈြတာလဲလို့ တစုံတဈယောကျကမြား မေးလာခဲ့မယျဆို တိတိကကြ ဖွနေိုငျမယျမထငျပါ ။ ကြှနျမကို အဲဒီလိုမေးခှနျးမြိုး မေးလာခဲ့မယျဆိုရငျတော့ သူ့အလိုလို ရငျထဲကနေ ပေါကျဖှားလာတဲ့ ခံစားခကျြသကျသကျလို့ ဖွမေိမှာပဲ ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြှနျမ ကွုံတှလေို့ကျရတဲ့ အခဈြဆိုတာ သူဘယျလိုနနေေ ခဈြတယျ ။ ဘာကွောငျ့မှနျးမသိကို ခဈြမိတာမြိုး ။ ဘာကွောငျ့ ခဈြတယျဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကြလညျး ကြှနျမမှာ မရှိဘူး ။ ရှိလညျး မရှိသငျ့ဘူးလားလို့ ။ အကွောငျးပွခကျြ တဈခုခုကွောငျ့သာ ခဈြမိသှားတယျဆို ဒါဟာအခဈြမဟုတျဘူး ။ စှဲလနျးမှု တဈခုပဲ ဖွဈနိုငျတယျ ။ ကြှနျမ သူ့ကို စှဲလနျးခဲ့တာ မဟုတျဘူး ။ ဘာအကွောငျးပွခကျြမှ မရှိဘဲကို ခဈြခဲ့မိတာ ။
ကိုကွီးဆိုတဲ့ သူ့ကို မွငျမွငျခငျြးခငျြး ခဈြခဲ့မိတယျ ။ ကိုကွီးနဲ့ပတျသတျတဲ့ အလအေ့ကငျြ့ အားလုံးလိုလိုကိုလညျး မွတျနိုးခဲ့တယျ ။ နောကျဆုံး ကိုကွီးဖွတျသှားလို့ ကနျြနရေဈခဲ့တဲ့ ကိုယျသငျးရနံ့လေးကအစ ရငျခုနျမိတယျ ။ ကိုကွီးနဲ့ ပတျသတျမှု့တိုငျးကို ရူးရူးမူးမူး ခဈြမိသှားတဲ့ အထိကို ကြှနျမဆိုတဲ့ *ရိုးရိုးရှငျးရှငျး*က ၊ ကိုကွီးဆိုတဲ့ *ဝနျးရံခ* ကို အရမျးခဈြခဲ့ပါတယျ ။
ကိုကွီးက အမွဲတမျး တကျကွှလနျးဆနျးနပွေီး အစနောကျကလညျး သနျလှနျသူပါ ။ အမွဲလိုလို ပြျောပြျောနတေတျပါတယျ ။ အဲဒီလို လူတဈယောကျကို တိတျတခိုး သဘောကနြတေဲ့ ကြှနျမကတော့ အေးအေးဆေးဆေး နတေတျသူပါ ။ ပနျးရောငျအကျြီတှကေိုပဲ ဒီဇိုငျးအမြိုးမြိုး ပွောငျးပွီး ဝတျဆငျတတျတယျ ။ အဲဒီလို တညျငွိမျအေးဆေးစှာ နတေတျတဲ့ ရှငျး လိုမိနျးကလေး တဈယောကျက ၊ အစနောကျသနျပွီး အငွိမျမနတေတျသူ ကိုကွီးကို တိတျတခိုး ခဈြနခေဲ့တာ အနညျးငယျတော့ ထူးဆနျးနပေါတယျ ။
ကိုကွီးနဲ့ရှငျးက ဥပဒမေဂြောနဲ့ DAY-တကျ နကွေသူတှပေါ ။ ကိုကွီးက FINAL ။ ရှငျးက third-year ။ ကိုကွီးကို ခဈြမိနပေမေဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျအနနေဲ့ ရှငျး ရငျထဲက ရှိတာတှေ ကိုကွီးသိအောငျ လုပျဖို့မပွောနဲ့ ရလောမွောငျးပေးတောငျ လုပျဖို့ တျောတျော မလှယျတဲ့ အလုပျပါ ။ ဒါပမေဲ့ ကိုကွီးဆီက အခဈြကိုတော့ ရိုးရှငျးစှာနဲ့ မြှျောလငျ့ ၊ တောငျ့တမိတယျ။
ကိုကွီးနဲ့ရှငျးကွားမှာ မှတျမှတျထငျထငျ ဖွဈရပျလေးတဈခုကို ကံတရားက ဖနျတီးပေးခဲ့တယျ။ အဲဒီဖနျတီမှုလေးက ကိုကွီးအတှကျ ကံဆိုးစမှေုတဈခုပမေဲ့ ရှငျးအတှကျတော့ ကံကောငျးမှု လေးတဈခု ဖွဈနခေဲ့ပါတယျ ။ ဘာလဲဆိုတော့ ကိုကွီးက FINALမှာ စာမေးပှဲ ကပြါတယျ ။ ရှငျးက အောငျတော့ ကိုကွီးနဲ့ အတနျးတူတူ ဖွဈသှားခဲ့တယျ ။ ကိုကွီးက စာမေးပှဲ ကပြမေဲ့ ခပျပြျောပြျောပါပဲ။
ကိုကွီးနဲ့ရှငျး စတငျပတျသတျဖို့ ကံတရားက ရှငျးကို မကျြနှာစာပေးခဲ့တယျလို့ ဆိုရမှာပဲ ။
အဲဒီနကေ့ အခနျးထဲက ခပျတညျတညျနဲ့ ထှကျလာတဲ့ ရှငျးကို ကိုကွီးက အားပါးတရ ပွုံးပွနတေော့ ရှငျး အံ့သွသှားခဲ့တယျ ။ သူအနားရောကျတော့
“ ဟိတျ ရိုးရိုးရှငျး paper(1) စာအုပျ ခဏငှားပါလား........ မမှီလိုကျလို့ပါ ”
“ ဘယျမှီမှာလဲ သူမြားတှကေို လိုကျစနောကျနတောကို ”
ပါးစပျကပွောလဲပွော လကျကလညျး လှယျအိတျထဲက စာအုပျကို ယူကာ ပေးပွီးဖွဈနတေယျ ။
“ မနကျဖွနျ ရှငျးစာအုပျကို မမနေဲ့နျော ကိုဝနျးရံခ ”
“ မမပေ့ါဘူး........စိတျခြ ။ လိုကျစတယျ ဆိုတာကလညျး ခငျလို့စတာပါ ။ ဒါနဲ့ ကိုယျကို ကိုဝနျးရံခလို့ မချေါပါနဲ့ ။ ရိုးရိုးရှငျးထကျ ကွီးတယျလေ ကိုကွီးလို့ ချေါလေ.........နာမညျအပွညျ့စုံ ချေါတော့ မောတာပေါ့ ”
“ဟုတျကဲ့ ။ ရှငျး သှားတော့မယျ ”
ဒီနေ့ ရှငျးဆီက စာအုပျငှားတာရော ၊ ကိုကွီးနှငျ့ တရငျးတနှီး စကားပွောခှငျ့ရတဲ့အတှကျပါ ရှငျး အရမျးပြျောသှားတယျ ။ ။ ရှငျး ရငျထဲကနေ တိတျတခိုးချေါနမေိတဲ့ နာမညျလေးက ကိုကွီိးချေါခိုငျးတဲ့ နာမညျလေးနဲ့ ထပျတူကနြတေဲ့အတှကျပါ ကွညျနူးနမေိတယျ ။ ဒါနိမိတျကောငျးတဈခုလို့ အသားယူ မှတျထားပါရစေ ကိုကွီးရယျ ။
တဈနေ့ ရှငျး အရမျးအံ့သွ သှားခဲ့တယျ ။ အသကျရှူရပျသှားပွီးလို့ ထငျလိုကျရတယျ ။ ရငျတှေ အခုနျနခေဲ့ပါတယျ ။ ကွညျနူးလိုကျတာ ။ ရှငျး စာအုပျတဈအုပျကို စိတျဝငျတစား ဖတျနခြေိနျမှာ ကိုကွီးတို့သူငယျခငျြးတဈစု ရှငျးဘေးက နဖွေတျသှားကွတယျ ။ အဲဒီအခြိနျမှာပဲ ရှငျးစာအုပျပျေါကို အရမျးလှတဲ့ နှငျးဆီပနျးအဖွူလေးတဈပှငျ့ ကလြာတယျ ။ ကလြာတဲ့ ပနျးလေးကို တအံ့တသွ ကိုငျလိုကျပွီးတာနဲ့ မော့ကွညျ့လိုကျတော့ ပနျးပှငျ့ကလေးရဲ့ ပိုငျရှငျက ကိုကွီး ဖွဈနတေယျ ။ ပနျးပှငျ့ကလေး တငျပေးသှားပွီး ခပျတညျတညျ ဆကျလြှောကျသှားပါတယျ ။ ရှငျးက အံ့သွပွီး စိုကျကွညျ့နခြေိနျ ကိုကွီး ပွနျလှညျ့ကွညျ့တာနဲ့ အကွညျ့ခငျြး ဆုံသှားကွတယျ ။ ရှငျးရငျထဲ အတိုငျးဆမသိ ပြျောရှငျ ကွညျနူးသှားမိပမေဲ့ ရှငျးမကျြနှာပျေါမှာတော့ အဲဒီအမူယာတှေ တဈခုမှ မပျေါအောငျ နပွေနိုငျခဲ့ပါတယျ ။
အဲဒီနောကျပိုငျးကစပွီး ကိုကွီးနဲ့ရှငျးကို လူတျောတျောမြားမြား သတိထားမိသှားကွတယျ ။ ကိုကွီးရဲ့ အစနောကျသနျမှု နဲ့ ရှငျးရဲ့အေးဆေးတညျငွိမျမှုကလညျး ဆနျ့ကငျြဘကျကွီးဖွဈနပွေနျတော့ လူအမြားရဲ့ စိတျဝငျစားခွငျးကို ပိုခံရတယျ ။ ရှငျးအနနေဲ့ ကိုကွီးကို ဘယျလိုနညျးနဲ့ ရှောငျဖယျနနေေ ကိုကွီးကတော့ လုံးဝနောကျမဆုတျပါဘူး။ ကိုကွီး အပွုမှူတှကေ ရှငျး အတှကျ
ရငျခုနျလှိုကျမောဖှယျ ကောငျးပမေဲ့ ကိုကွီးကို ရှငျး အပွညျ့အဝ မယုံကွညျရဲသေးဘူး ။ ညဘကျတှေ ရှငျးဆီကို ဖုနျးဆကျတာက တမြိုး ။
တနေ့ ကိုကွီးဆီက ဖုနျးလာပါတယျ ။
“ ရှငျး ကိုကွီးပါ ”
“ကိုကွီး ရှငျးကို ဘာကိစ်စနဲ့အတငျးလိုကျပတျသတျနတောလဲ”
“ဘာဖွဈလို့လဲ ရှငျးရဲ့ ။ ကိုကွီးနဲ့ ရှငျးက မဂြောတူ သူငယျခငျြးတှလေေ ။ မဟုတျဘူးလား”
“မဂြောတူ ဆိုတာတော့ ဟုတျပါတယျ ။ ဒါပမေဲ့ သူငယျခငျြးတှမှေ မဟုတျတာ”
“ကိုကွီးကတော့ သူငယျခငျြးပဲ ”
“ ရှငျးက ဘယျသူကို မှ လှယျလှယျမခငျတတျဘူး ”
ရှငျး ဘယျလိုပဲ ပွောပွော ကိုကွီးက လုံးဝ ဂရုမစိုကျပါဘူး ။ သူဖွဈခငျြတာ သူပွောခငျြတာကိုပဲ ဇှတျတိုးပူဆာ တတျပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ကိုကွီးရဲ့စကားသံတှကေ ကွာငျနာမှု နှေးထှေးမှု တှေ လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲ စီးမြောပါဝငျနတောကိုတော့ ရှငျး မငွငျးနိုငျပါဘူး ။ ကိုကွီးလို လူတဈယောကျက အခုလို ကွညျနူးစရာကောငျးတဲ့ ရငျခုနျမှုမြိုးတှကေို ပေးစှမျးစမေယျလို့ လုံးဝ မထငျခဲ့မိဘူး။
ဒီလိုနဲ့ စာမေးပှဲဖွဆေိုပွီးခြိနျမှ ကြောငျးတှေ ပိတျသှားခဲ့ပါပွီ ။ ရှငျး ကိုကွီးကို လုံးဝ မတှရေ့တော့ပါဘူး ။ ကိုကွီးရဲ့ စတတျနောကျတတျတဲ့ အလအေ့ကငျြ့တှကွေောငျ့ ကိုကွီးအပျေါ မယုံရဲခဲ့တာမို့ ကိုကွီးလိုခငျြတဲ့ အဖွကေိုလညျး မပေးခဲ့မိဘူး ။ အခုလို ခှဲရတော့မှ ပိုပွီးလှမျးတတျလာခဲ့တယျ ။ ကိုကွီးကို အရမျးသတိရတယျ ။ အရမျး လှမျးနတေယျ ။ ကိုကွီးကို အရမျးခဈြတယျဆိုတာလညျး အခုမှ ပိုပွီး သခြောသှားပါတော့တယျ ။ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ ထားသငျ့ ထားအပျတဲ့ ဂုဏျသိက်ခာတှကေို လုံးဝအပှနျးပဲ့ မခံနိုငျတဲ့အတှကျ ရှငျးဘကျက စပွီးဆကျသှယျဖို့ကိုတော့ လုံးဝမကွိုးစားပါဘူး ။ကြောငျးတှပေိတျသှားကတညျးက ဖုနျးလေးတဈခကျြတောငျ ဆကျဖျောမရတဲ့ ကိုကွီးကို ရှငျးစိတျထဲမှာ နာကညျြးနမေိတယျ ။
ရှငျး တဈယောကျတညျး အခနျးထဲမှာ ကိုကွီးကို ကွိတျလှမျးနတေုနျး အခနျးထဲကို မမေေ ဝငျလာတယျ ။
“သမီးရေ အောကျမှာ ဧညျ့သညျတှေ ရောကျနတေယျ ။ သမီးဖဖေကေ သမီးလေးနဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြလို့တဲ့ ။ မမေနေဲ့ ခဏဆငျးတှရေ့အောငျ ။ အောကျမှာ ဖဖေလေဲ စောငျ့နတေယျ”
“ ဘယျသူတှလေဲ မမေေ ”
“ သမီးဖဖေရေဲ့ အခဈြဆုံးသူငယျခငျြး မိသားစုလေ ။ ပွနျဆုံကွတာ မကွာသေးဘူး သမီးရဲ့ ။ ဖဖေနေဲ့မမေေ သမီးလေးကို ကွိုတောငျ မပွောထားမိဘူးက ။ သမီးနဲ့ ပတျသတျပွီး ကိစ်စလေးလညျး ရှိနတေယျ ။ ဘာလဲဆိုတော့ သမီးဖဖေရေဲ့ သားနဲ့သမီးလေးကို နရောခပြေးဖို့ ။ ကွိုမပွောဘူးဆိုတာလညျး မမေသေ့မီးလေးက မမေတေို့စကားကို အမွဲနားထောငျနကွေဆိုတော့ ။ မမေတေို့ စီစဉျပေးမယျ့ သူက သမီးအတှကျ စိတျဆငျးရဲရမယျ့ လူမဟုတျဘူးဆိုတာကိုတော့ မမေေ ရဲရဲကွီး အာမခံပါတယျ ”
မမေကေ စကားအရှညျကွီး ပွောလိုကျရလို့ မောသှားဟနျဖွငျ့ သကျပွငျးလေးခရြငျး ခဏနားပါတယျ ။ ရှငျးဆီက ပွနျပွောလာမယျ့ အဖွစေကားကို စောငျ့ဆိုငျးနားထောငျနပေါတယျ ။
သမီးအလိမျမာလေးပီပီ ရှငျးဘယျလိုအငျအားတှနေဲ့ ငွငျးရကျမှာလဲ ။
“ ဟုတျကဲ့ပါ မမေေ ။ သမီး ဆငျးတှပေ့ါ့မယျ ”
“ အို ! လိမျမာလိုကျတဲ့ သမီးလေးရယျ ”
မမေတေို့ စိတျခမျြးသာမယျဆို သမီးကနြေပျပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ မမေရေယျ ရှငျး ရငျထဲမှာတော့ ရငျကှဲနရေပါပွီ ။ ဒါပမေဲ့ ရှငျးနှလုံးက ကမြဲ့မကျြရညျတှကေို မမေတေို့ရဲ့ ပီတိအပွုံးတှနေဲ့ ရှငျးလဲလိုကျပါ့မယျ ။ ကိုကွီးရေ တကယျကိုဝေးကွရတော့မယျ ။ ရှငျး ကိုယျ့ကိုယျကို
ကွညျ့ကောငျးအောငျ အနညျးပါးပွငျဆငျပွီး မမေနေဲ့အတူ အောကျထပျကို ဆငျးခဲ့လိုကျပါတော့တယျ ။
ဧညျ့သညျမိသားစုက ရှငျးဆငျးလာမယျ့ဘကျကို ကြောခိုငျးပွီး ထိုငျနကွေပါတယျ ။ ရှငျး ဧညျ့ခနျးမှာ ဝငျထိုငျလိုကျရငျး အားလုံးကို ခြုံဂုံပွီးပွုံးပွလိုကျခြိနျမှာတော့ ရှငျး အရမျးအံ့သွသှားခဲ့တယျ ။
“ဟုတျတယျ သမီးရေ ။ သမီးကိုကွီးက ကွိုမပွောပါနဲ့ဆိုလို့ မမေတေို့လညျး မပွောရတာ ။ သူက အစနောကျသနျတော့ သမီးက သားကို ကွညျ့မရဘူးဆို ။ မောငျဝနျးရံခက မမေတေို့သဘောတူတဲ့ သတို့သားလောငျးပဲ သမီး ။ ကဲသားနဲ့သမီး သခြော ဆှေးနှေးကွအုံးပေါ့ ”
လူကွီးတှကေ ဆှေးနှေးခှငျ့ ပေးလိုကျတာနဲ့ ရှငျးတို့နှဈယောကျ ခွံထဲကို ဆငျးလာခဲ့ပါတယျ ။ တနရော အရောကျမှာတော့ ရှကေ့သှားနတေဲ့ ရှငျးကို ကိုကွီးက “ ရှငျး ” လို့ ခပျတိုးတိုးလေး ကပျချေါလိုကျရငျဘဲ ရှငျး ရငျခုနျသံတှေ ဆူညံနပေါပွီ ။
“ရှငျး ကိုကွီးကို စိတျမဆိုးပါနဲ့နျော”
“မဆိုးရဲပါဘူး လူကွီးတှကေ ကိုကွီးဘကျက ရှိနပွေီပဲ”
“ဟာကှာ ! ကိုကွီး ရှငျးလေးကို အရမျးခဈြလို့ပါ ။ အဆုံးရှုံးမခံနိုငျလို့ လူကွီးတှကေို အပူကပျမိတာပါ”
“ရှငျး ကိုကွီးကို ခဈြလားဟငျ...ကိုကွီးကို ပွနျခဈြပါနျော”
“ခုမပွောတတျလဲ ကိုကွီးကို လကျထပျပွီးမှ ပွောနျော”
“အံမယျ ကိုကွီးကို ဘယျသူက လကျထပျမယျပွောလို့လဲ”
“ရှငျးကသာပွောနေ လူကွီးတှကေ ဖိတျစာတောငျ ရိုကျတော့မယျဗြ”
“ဟှနျး! မုနျးစရာ ကောငျးလိုကျတာ”
“ဘာ........ခဈြစရာ ကောငျးလိုကျတာ ဟုတျလား”
ရှငျး ဘာပွောပွော သူကို ပနျးနဲ့ပေါကျတယျလို့ ကိုကွီးကထငျနလေရေဲ့ ။ ပွုံးပြျောနတောပဲ ။ ရှငျးလညျး အရမျးပြျောနပေါတယျ ။ ကိုကွီးထကျ အဆပေါငျးမြားစှာ ပိုပြျောနရေသူပါ ။ ကိုကွီးကို အရငျဆုံး တိတျတခိုးစှဲလနျး ၊ ခဈြခဲ့ရသူတဈယောကျက ရှငျးပါ ကိုကွီးရယျ ။ ဒါပမေဲ့ ဒီလြှို့ဝှကျခကျြလေးကို မိနျးမတဈယောကျရဲ့ ရှိသငျ့ရှိထိုကျတဲ့ မာနနဲ့ သိက်ခာတရားအတှကျ လြှို့ဝှကျထားပါရစေ ။ ကိုကွီးနဲ့ရှငျးတို့နှဈယောကျ လြှောကျလှမျးရမယျ့ ဘဝခရီးလမျးလေးဟာ ပြျောရှငျကွညျနူးစရာတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနမှောပါ ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုကွီးနဲ့ရှငျးတို့ရဲ့ ခဈြခွငျးတှေ ထပျတူညီ နလေို့ပေါ့ ။
ခိုငျလေး ( ရှတေောငျ )
အတှဲ ( ၅ ) ၊ အမှတျ ( ၁၂ )
ဒီဇငျဘာလ ၊ ၂၀၁၀ ခုနှဈ
ပထမဦးဆုံး ပရငျ့ပါခဲ့သော ဝထ်ထုတိုလေးပါ